Graphic Logo က အရေးပါလား? - WebsiteDesign.com.mm
Graphic Logo က အရေးပါလား?
1:48am on Monday 16th December 2019
ယနေ့ခေတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရာတွင် Social Media ကလည်းအရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေပါပြီ။ Social Media မှာ လုပ်ငန်းလုပ်ခြင်းဟာ ပြန့်နှံ့လွယ်ကူစေပါတယ်။ ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန့်နှံ့မှု နှုန်းဟာအလွန် လွယ်ကူတဲ့ အတွက် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်တဲ့ အခါမှာလည်း အမှားကင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းကို Audience တွေဆီကို ထိုးဖောက်နိုင်မဲ့ Web Page/ Facebook Page အစရှိတဲ့ Platform တစ်ခုခုကိုအသုံးပြုဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။ သင့်လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ဖို့ Platform မှာ အဓိက ကျတဲ့အရာကတော့ Logo ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Logo ပြုလုပ်တာဟာ ဘာမှ မခက်ခဲဘူးလို့ ထင်ရပေမဲ့ မိမိလုပ်ငန်းနဲ့ ကိုက်ညီပြီး စစ်မှန်တဲ့ Logo တစ်ခုရရှိဖို့ ကတော့ အချိန်ယူပြီး တိကျမှု ရှိပါလိမ့်မယ်။
၁. တိကျကိုက်ညီတဲ့ အချိုး
သင့်လုပ်ငန်းမှာ ကောင်းမွန်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Logo တစ်ခုရှိနေပြီပဲဆိုပါစို့၊ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီ Logo က Social MediaPlatform တစ်ခုပေါ်ကိုတင်လိုက်တဲ့ အခါမှာ ဘာပုံစံမှန်းမသိအောင်သေးနေမယ်ဆိုရင် သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ထိခိုက်မှုအနည်းအများရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Logo ပြုလုပ်တဲ့ အခါမှာ တိကျသေသပ်တဲ့ အချိုးလိုအပ်ပါတယ်။ Social Media Platform တွေမှာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု Logo Size တွေက ကွဲပြားရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ ဥပမာ - Facebook, Instagram, Twitter အစရှိတဲ့ Social Media Platform တွေမှာ Logo Size ဟာ စတုရန်းပုံသဏ္ဍာန် ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Logo တစ်ခုပြုလုပ်ရေးဆွဲနေတဲ့ အချိန်မှာ စစ်ဆေးမှုကို နှစ်ခါ၊ သုံးခါ လောက်ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Logo တစ်ခုမှာ အရောင်ဟာဆိုရင်လည်း အရမ်းကိုစကားပြောပါတယ်၊ Logo မှာပါတဲ့ ပုံ(သို့) စာဆိုရင်ဒီတိုင်းသာမန်ပြုလုပ်ထားတာနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ အရောင်ကိုသုံးထားတဲ့ Logo ဆိုရင် ကြည့်ရတာအရမ်း
သိသာပါတယ်။ ဒီတော့ Logo ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် မိမိ ပြုလုပ်မယ့် Logo နဲ့ ကိုက်ညီမယ့်အရောင်ကို ရွေး ချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၃. ရိုးရှင်းပြီး အများနဲ့မတူပါစေနဲ့
သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ Logo ဟာကြည့်လိုက်တာနဲ့ ရိုးရှင်းပြီး Audience တွေရဲ့ စိတ်ထဲ စွဲထင်နေစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Logo ပြုလုပ်တဲ့ အခါမှာ အများနဲ့ မတူတဲ့ Idea ကို ရိုးရှင်းပြီး ကြည့်လိုက်သူရဲ့ စိတ်ထဲမှာစွဲထင်နေစေမယ့် Logo တစ်ခုဖြစ်အောင် သေသေချာချာ စဉ်းစားပြီး ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အထက်ပါအချက်တွေဟာ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် Logo ပြုလုပ်တဲ့ အခါမှာ မရှိမဖြစ်လုပ်ဆောင်ရမယ့် အခြေခံအချက်လေးတွေဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ဒီတော့ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ကိုက်ညီမယ့် Logo Design လေးတွေပြုလုပ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Blog - WebsiteDesign.com.mm
အောင်မြင်တဲ့ Website တစ်ခုအတွက် ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အသုံးအနှုန်းများ 5:14pm on Tuesday 18th August 2020
Website တစ်ခု Subscriber တိုးလာဖို့၊ Business Website ဖြစ်လို့ Sale Inquiry တွေတိုးလာဖို့ အတွက် ဆိုရင်
Website တွေမှာရှိထားသင့်တဲ့ User Behaviour Track လုပ်ခြင်း 5:45pm on Wednesday 22nd July 2020
User Behaviour ကို Track လုပ်ခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ Website ကိုနေ့စဥ်ဝင်ရောက်တဲ့ Visitor တွေရဲ့ပြုမူဆောင်ရွက်မှုများကိုသိနိုင်ရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ User Behaviour
Social Media Marketing Tips 8:00pm on Thursday 9th April 2020
အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဖြစ်လာစေဖို့ အတွက် Digital Marketing နယ်ပယ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ Social Media Marketing နဲ့ပတ်သတ်ပြီး သိထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာအချို့ကို ဝေမျှပေးသွားချင်ပါတယ်…
Covid-19 or Corona Virus အတွက်သိထားသင့်တဲ့အချက်များ 7:17pm on Tuesday 17th March 2020
၂၀၁၉ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ Covid-19 ခေါ် Corona Virus အသစ်တစ်မျိုးဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံများအားလုံးနီးပါးအပေါ် ချိန်းခြောက်မှု
လက်ရှိ Trend ဖြစ်နေတဲ့ Website Design များ 5:13pm on Thursday 12th March 2020
နောက်ပိုင်းမှာ Website တစ်ခု အောင်မြင်လာဖို့အတွက်ဆိုရင် Web Design ကလည်း အရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခု မှာပါဝင်နေပါတယ်။ Website ကို Structure